Max Auto Car Co.,Ltd. Carmudi Myanmar [Burma]
09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	email ပို့ရန်	Max Auto Car Co.,Ltd.	ယုံကြည်ရသော ရောင်းသူ	သင့်ရဲ့ နာမည် အီးမေးလ်
Max Auto Car Co.,Ltd.
Max Auto Car Co.,Ltd. –
No. (6/7), A1 Street, Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex, Mingalardon Township, Yangon. Corner of 78 St & Khinsawmhu St, Mandalay.
Max Auto Car Co.,Ltd
Max Auto Car Co.,Ltd သည် Korea နိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့်သော ကားများကို တစ်လလျှင် အစီးရေ ၃၀ကျော် တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ကားများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း လိုအပ်ချက်မရှိအောင် စီစဉ်ပြီးမှ ဈေးကွက်တွင်းသို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှ အင်ဂျင်နှင့်ဂီယာဘောက်စ် ကို ၆လ (သို့) ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀ အာမခံပေးလျက် Customer များအား စိတ်ချမ်းသာအောင် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ လိုအပ်သော Korea ကားများ၏ Spare Parts မျိုးစုံကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။ Max Auto Car Co.,Ltd ရုံးချုပ်သည် Korea နိုင်ငံမှ ဖြစ်ပါသည်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်လည်း အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး တို့တွင် အရောင်းပြခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အရစ်ကျ ငွေပေးချေမှုဖြင့်လည်း ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
Max Auto Car Co.,Ltd. အတွက် တင်ပြထားတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာ‌တွေမရှိ‌သေးပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး အ‌နေနဲ့ အ‌တွေ့အကြုံကို တင်ပြတဲ့သူလုပ်လိုက်ပါဦး။
09:30 - 16:30 အင်္ဂါနေ့:
09:30 - 16:30 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့:
09:30 - 16:30 ကြာသပတေးနေ့:
09:30 - 16:30 သောကြာနေ့:
09:30 - 16:30 စနေနေ့ :
09:30 - 16:30 တနင်္ဂနွေနေ့:
09:30 - 16:30 ရရှိနိင်သောဝန်ဆောင်မှုများ။